के कपर्निकस वा अरस्तु तपाईंको व्यवसाय चलाउँदैछ? | Martech Zone
बुधबार, डिसेम्बर 30, 2009 शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
त्यहाँ मैले धेरै किसिमका व्यवसायहरू गरें जुन मैले काम गरें ... र मलाई लाग्छ कि मैले सबैभन्दा धेरै मन पराउनेहरू उनीहरू हुन् जसले पहिचान गर्छन् कि उनीहरू आफ्ना ग्राहकहरू जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छैनन्। केहि अरूले पनि एक ग्राहक छ भनेर स्वीकार गर्दैनन्।
कोपार्निकसलाई आधुनिक जगतको खगोलशास्त्रको जनकको रूपमा पहिचान गरिएको छ किनकि उनले जियोसेन्ट्रस्ममा हेलियोसेन्ट्रिज्मको तर्क गरे। अर्को शब्दमा, सूर्य हाम्रो ग्रहहरूको प्रणालीको केन्द्र थियो, पृथ्वी होइन। यो निन्दनीय थियो र उनी विद्वानहरूको सम्पूर्ण संस्कृतिको बिरूद्ध थिए जुन त्यसबेला धर्मसँग गाँसिएको थियो। तर ऊ सहि थियो।
यदि तपाइँ तपाइँको व्यवसायको ब्रह्माण्डको रहस्यहरू समाधान गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ आफैंलाई कसरी केही प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ तपाइँको व्यापार कसरी चल्दैछ भनेर। तपाईको ग्राहकलाई तपाईको व्यवसायको केन्द्रका रूपमा मान्यता नदिनु र यसमा भएका जो कोही भन्दा बढि महत्वपूर्ण कर्मचारी ब्यापार, ग्राहक कारोबार, र अन्ततः तपाइँको व्यापारको मृत्यु हुन सक्छ।
परिणाम हामी कस्तो गर्दैछौं? हाम्रा ग्राहकहरु कसरी गर्दैछन्?
उपयोग तिनीहरू यसलाई गलत प्रयोग गर्दैछन्। हामी त्यसलाई कसरी समायोजित गर्न सक्छौं?
लागत हामीले बढी चार्ज गर्नु पर्छ। हाम्रा ग्राहकहरु लाई हाम्रो उत्पादनहरु वा सेवाहरु को मूल्य के हो?
अवधारणा हामीलाई किन छोड्नुभयो? के हामी तपाईंलाई राख्नको लागि सबै आवश्यक गरिरहेछौं?
भागीदार तिनीहरूले हाम्रो लागि के गरे? हामी उनीहरूको सफलता सुनिश्चित गर्न के गर्न सक्छौं?
कर्मचारीहरु तिनीहरू राम्रो फिट थिएनन्। हाम्रा कर्मचारीहरूले हामीलाई सफल बनाउँछन्।
बजेट स्वीकृति प्राप्त गर्नुहोस्। तपाइँ जवाफदेही हुनेछ।
मार्केटिङ अधिक नेतृत्व। हामी निश्चित रूपमा सहयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पहिचान गर्नुहोस्।
नेतृत्व योग्यता के तिनीहरूको क्रेडिट कार्ड प्रक्रिया भयो? के हामी तिनीहरूलाई सफल बनाउँछौं?
कर्मचारी लचिलोपन पुस्तिकाले के भन्छ? हामी कसरी उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व सुधार गर्न सक्छौं?
रणनीति काम गरिरहेको छैन ... अर्को पुनः org! हाम्रा नेताहरूले उनीहरूको year बर्षे योजना पेश गर्छन्।
विशेषताहरु तिनीहरूले हामीलाई नक्कल गरे! हामी अब के काम गर्दैछौं?
सार्वजनिक सम्बन्ध ध्यान प्राप्त गर्नुहोस्। स्नेह प्राप्त गर्नुहोस्।
सामाजिक संलग्नता IT सबै चीज रोक्नुहोस्! कर्मचारीहरुलाई संलग्न गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्!
तपाई कस्तो किसिमको कम्पनी हुनुहुन्छ? सामाजिक मिडियाको यी दिनहरूमा, यो भन्न एकदम सरल छ। यदि तपाइँको सोशल मिडिया को विचारले तपाइँको सन्देश लाई तपाइँको ग्राहकहरुमा पुर्याईरहेको छ भने, तपाइँ अरस्तुद्वारा चलाइरहनुभएको छ। यदि तपाईंको सन्देशले तपाईंको ग्राहकहरूको सफलताको घोषणा गरिरहेको छ भने तपाईं कोपर्निकसद्वारा चलाइरहनु भएको छ। यसले विश्वलाई १,1,800००+ वर्ष लगाएर यो पत्ता लगायो ... आशा छ कि यसले तपाईंको व्यवसायलाई लामो रूपमा लिदैन।
कसरी काममा नयाँ वर्षको रिजोलुसनहरू नगर्ने
डिसे 30, 2009 मा 7: 29 AM
चलाख तुलना, डग। तुलनाको तुलनामा हेनरी फोर्डले कपर्निकसको रूपमा शुरू गरे र केही समयको लागि अरस्तु बने र अन्तत: कपर्निकन व्यापार ब्रह्माण्डको वास्तविकतामा पछि झेलियो। १ 14 औं शताब्दीको विपरीत, जो व्यापारमा गैर ग्राहक-केन्द्रित दृष्टिकोण अनुसरण गर्छन् उनीहरूको विश्वासको लागि टार्र्ड हुँदैनन् र फिचर हुँदैनन्। तिनीहरू दिवालिया हुन्छन् वा मुद्दा हालिन्छ।